Yintoni endinokuyilindela kuMasipala wam? – Civics Academy
Yintoni endinokuyilindela kuMasipala wam?
ICandelo 152 lomGaqo-siseko lichaza iinkalo zokugxila ezintlanu zooMasipala:
1. Lizisa urhulumente wentando yesininzi nophendulayo ngaloo nto ayenzayo.
2. Lizisa iinkonzo ngendlela ezinzileyo.
3. Likhuthaza uphuhliso lwezentlalo noqoqosho.
4. Likhuthaza imeko yokusingqongileyo ekhuselekileyo nesempilweni.
5. Likhuthaza ubandakanyeko loluntu.
NgokoMthetho weeNkqubo zikaMasipala (Municipal Systems Act), inkonzo esisiseko yileyo iqinisekisa umgangatho owamkelekileyo nofanelekileyo wobomi ngokubhekisele kumanzi, kumphutha, ekuthuthweni kwenkunkuma, kwiindlela nakulawulo lwamanzi ezikhukula, umbane, ubonelelo ngezindlu nasekucinyweni komlilo. Uninzi lwemigangatho yeenkonzo igqitywa emthethweni okanye kumaxwebhu omgaqo-nkqubo yona ichaza imigangatho yeenkonzo eyamkelekileyo ngokubanzi.
Ukwenziwa kwenkonzo kuyanciphiseka xa urhulumente kazwelonke okanye wephondo edlulisela imisebenzi eluxanduva lwakhe kumacandelo ezasekhaya ngaphandle kwakukhupha zibonelelo zoncedo eziyimfuneko. Oku kubizwa ngokuba “sisigunyaziso esingafumananga kuxhaswa ngemali” (“unfunded mandate”). Ezinye iimbophelelo ziquka ukunqongophala kwengeniso ngenxa yokungahlawuli komsebenzisi-nkonzo lowo, ngenxa yokuba ncinane kweegranti zikarhulumente kunye nolawulo lwezemali ngendlela ebuthathaka. Ezinye iimeko ziquka ukunqongophala komhlaba ofanelekileyo, intsebenziswano ebuthathaka kumacandelo karhulumente okanye ukuhlala kwindawo esemaphandleni. Iimeko ezilawulayo kwakhona zinako ukukunciphisa ukwenziwa kwenkonzo, umzekelo, iinkonzo zokucima umlilo zinokunciphiseka ngenxa yokuba amatyotyombe asondelelene kakhulu elinye kwelinye ukuba zinganako iinjini zezicima-mlilo ezintlanu zingadlula okanye ngenxa yokungabikho koqhagamshelwano lwamanzi lungundoqo.